Iindaba - 2021 yeNgxelo yoLawulo lweNkomfa yoNyaka yeQela
Umkhombandlela ocacileyo, ungqinelane nohlaziyo, wandlala ikamva
Ingxelo yoNyaka yeNkomfa yoLawulo ye-2021 yeZhanzhi
Intlanganiso ye-2021 yeZhanzhi yeQela yentlanganiso yonyaka ibibanjelwe eSanjia Port, ePudong New Area, eShanghai ukusukela nge-25 kaMatshi ukuya kwi-28. Abantu abangama-54 kubandakanya abaphathi bamaqela, abaphathi ngokubanzi benkxaso-mali, kunye nabaphathi besebe kwikomkhulu. I-ajenda yale ntlanganiso ibandakanya ingxelo yemeko yezorhwebo ka-2020 kunye nesicwangciso sokusebenza sika-2021, umgca weqela, ingxelo yomsebenzi wenkampani nganye yesebe kunye nomzi-mveliso ngamnye wokulungisa, isemina yokudibanisa ushishino kunye norhwebo, ingxoxo ekhethekileyo yolawulo lweFeichang, Ingxoxo yokuphucula umba wengxoxo, iisemina zokusebenza kwemizi-mveliso kunye nomnye umxholo. Umoya wentlanganiso ubulungile kwaye umxholo ubuchaziwe, obonelele wonke umntu ngethuba lokufunda omnye komnye kwaye wafezekisa iinzuzo ezithile.
INtetho Jikelele yokuPhetha
Intlanganiso yonyaka ye-2021 yeZhanzhi yeqela loshishino sele iza kuphela. Ndonwabile kakhulu ukubona ukuba wonke umntu uzele ukuzithemba kunye nomoya wokulwa ukufezekisa iinjongo ezintsha. Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo, ukucinga komntu wonke, izimvo zakhe malunga nemicimbi, kunye nethemba ziye zacaca ngakumbi kwaye zinzulu kwaye zibhetele. Naluphi na uhlengahlengiso kunye nohlaziyo kufuneka lube nenkcubeko njengesiseko, kwaye kunzima ukuhlangabezana nobunzima, ukuze kungabi lula ukulingiswa kwaye kungabi lula ukoyiswa. Inkampani kufuneka ilandele umgca weqhinga lenkonzo, kufuneka ibenako ukubonelela ngenkonzo, kufuneka ijolise kwaye ibe nobungcali, ukuze iqhubeke nokuphuhlisa. Ulawulo liqhinga, elifuna amanyathelo kunye neendlela zokubamba ukufezekisa. Ngokusekwe kwimishini kunye namaxabiso achanekileyo, siya kuvula indlela entsha. Logama inkampani ikhona, uhlaziyo luya kubakho, kwaye ukuba umkhombandlela ngokubanzi ucacile, uhlengahlengiso luya kuzisa utshintsho olusemgangathweni. Vula indlela yenkampani yexesha elide yophuhliso, ungalibali injongo yoqobo, uyiqonde into oyenzileyo, uqonde injongo, kwaye uqonde ukukhula kwenkampani. Thobela uhlengahlengiso, cwangcisa, tyala imali, qhubeka, uye phambili ungagungqi!
Ngexesha lentlanganiso, bonke abathathi-nxaxheba beza kwipaki yokuqala yelizwe yasePudong kwaye bathatha inxaxheba kuhambo lweekhilomitha ezi-6, bedlula kwiifama ezinkulu kunye neentyatyambo ezahlukeneyo kunye nezityalo. Wonke umntu ubuyele kwindalo yendalo, wahamba, wathetha, wangena kwimood. Ukuphumla okungapheliyo.
Ngokudibana kwale ntlanganiso, wonke umntu wayeqinisekile, ulwalathiso lwacaca gca, kwaye nomdla wakhula. Sisebenze nzima ngokungqinelana neemfuno zentlanganiso ukuqinisekisa ukugqitywa kwemisebenzi yomsebenzi unyaka wonke kunye nokuzalisekiswa kweenjongo zomsebenzi.